May 10, 2020 - Lupyo News
အိမ်ရှေ့က ကားပေါ်မှာ မိခင်တစ်ဦး သူ့ရဲ့ ကလေးကို လာရောက်စွန့်ပစ်ခဲ့တာကို CCTV မှာ ပြန်ကြည့်ရတဲ့အခါ ….(ရုပ်သံ)
May 10, 2020 by Lupyo News
အိမ်ရှေ့က ကားပေါ်မှာ မိခင်တစ်ဦး သူ့ရဲ့ ကလေးကို လာရောက်စွန့်ပစ်ခဲ့တာကို CCTV မှာ ပြန်ကြည့်ရတဲ့အခါ ….(ရုပ်သံ) အမေ့ကို ခွင့်လွှတ်ပါ သားလေးရယ်.. တကယ်ဆို အမေ့ဘဝက အမေတို့ သားမိသုံးယောက်အတွက် ရပ်တည်ဖို့ ခက်ခဲလှပါပြီ။ သားလေးကို အရမ်းချစ်ပါတယ်ကွယ်.။ မေမေ့ဝမ်းနဲ့ ၉ လ လွယ်မွေးထားတာပဲသားရယ် မချစ်ပဲနေပါ့မလား။ အခုအခိုက်အတန့်လေးက အမေ့အတွက် တကယ်ကို ခက်ခဲနေလို့ပါ။ သားလေးကို စွန့်ပစ်ရမယ့် အသိက ရင်ကိုစူးတစ်ချောင်းလို တိုးဝင်နေတယ်။ သားလေးကို လမ်းဘေးမပစ်ရက်ပါဘူး။ သားလေးက အမေချစ်တဲ့ သားလေးပါ။ မြန်မာဇာတ်ကားထဲကလို သားလေးကို သူဌေးတွေက ကောက်ယူမွေးစားပြီး အမေတို့ထက် သာတဲ့ဘဝလေး ရစေချင်တယ်။ သားလေးကိုအမေတို့ ဘဝထဲမှာ ဒုက္ခ ခံမနေစေချင်ဘူးကွယ်။ လမ်းဘေးမှာဆို ခွေးတွေ၊ ပုရွက်ဆိတ်တွေ ကိုက်ခဲရင်း … Read more
“ပျိုပျို အိုအို တို့ အိမ်ထောင်မပြုခင် ဖတ်ရူသင့်တဲ့ မှတ်စု”
“ပျိုပျို အိုအို တို့ အိမ်ထောင်မပြုခင် ဖတ်ရူသင့်တဲ့ မှတ်စု” ကျွန်မရဲ့ အမျိုးသားက ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ ရာထူးခပ်ကြီးကြီးနဲ့ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ၊ သူဟာ အမြဲတမ်း အလုပ်ကိစ္စနဲ့နိုင်ငံခြားကို မကြာခဏသွားလေ့ရှိပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့ နေ့တော်တော်များများမှာလည်း ညတိုင်းလိုလို ဧည့်ခံပွဲတွေနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတတ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ အိမ်တောင်ကျခဲ့တာ တစ်နှစ်ကျော်လောက်မှာ ကျွန်မတို့မှာ သားလေးတစ်ယောက် ရလာပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ အမျိုးသားရဲ့ အလုပ်က အိမ်ထောင်ကျခါစထက် ပိုများလာပါတယ်။ ကျွန်မလည်း အလုပ်အသစ်တစ်ခု ပြောင်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက် အရင်ထက် အလုပ်ပိုရှုပ်လာပြီး မနက်တိုင်း ၇နာရီခွဲ အရောက် သွားရပါတယ်။ မိခင် လက်သစ်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်မဟာ ခုမှ ရလာတဲ့ သားဦးကို ဘယ်လို ပြုစုစောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတာ မသိခဲ့ပါဘူး။ ညဉ့်နက်နို့ဆာလို့ ထအော်လို့ ထထ တိုက်ရတာရယ် … Read more
စီးပွားတတ်မည့်အိမ်..ကိုယ်ယခုနေထိုင်နေတဲ့ အိမ်ဟာဘယ် အမျိုးအစားထဲပါနေလဲဆိုတာ လေ့လာ ဆန်းစစ်ကြည့် လိုက်ရအောင်
စီးပွားတတ်မည့်အိမ်..ကိုယ်ယခုနေထိုင်နေတဲ့ အိမ်ဟာဘယ် အမျိုးအစားထဲပါနေလဲဆိုတာ လေ့လာ ဆန်းစစ်ကြည့် လိုက်ရအောင် အိမ်၏ ခေါင်းရင်းနေအိမ်သည် မိမိအိမ်ထက်မြင့်မည်………ခြေရင်းအိမ်သည်လည်းမိမိအိမ်ထက်မြင့်ပါက ကိုယ်နေသောအိမ်သည် အမိုးနိမ့်နေလျှင်အိမ်ပုခက် ဟုခေါ်သည် ။နေသောမိသားစုသည် စီးပွားတက်၏ ။ ကိုယ့်အိမ်ခေါင်းရင်းအိမ်က အမိုးနိမ့်မည် ။ကိုယ့်အိမ်ခြေရင်းကလဲ အမိုးနိမ့်မည် ……ကိုယ့်အိမ်က အလယ်မှ အမိုးမြင့်မားနေပါကအိမ်မြင့်မိုရ်ဟုခေါ်သည် ။ လူကြီးမိဘတို့ကို ခေါင်းရင်းဘက်ထား၍ပြူ စုလုပ်ကျွေးအား သဒ္ဓါပြည့်ကအထူးကောင်းမွန်၏ ။ကိုယ့်အိမ်၏ခေါင်းရင်းကမြင့်မည် ။ကိုယ့်အိမ်၏ ခြေရင်းက ကိုယ့်အိမ်ထက်နိမ့်နေပါကအိမ်တောင်တန်းဟုခေါ်သည် ။တစ်စိမ့်စိမ့်စီးပွားဖြစ်၏ ။ကိုယ့်အိမ်၏ခေါင်းရင်းကနိမ့်၍ကိုယ့်အိမ်၏ ခြေရင်းအိမ်က မြင့်နေပါကစီးပွားအသည်းအသန်ရှာရတတ်သည် ။ရေဆန်အိမ်ဟုခေါ်သည် ။ရှေးလူကြီးများက မဝယ်သင့်ဟုဆိုကြ၏ ။ ကိုယ့်အိမ်၏ ခေါင်းရင်းနားတွင် မီးဖိုအကြီးကြီးဖြင့်စီးပွားရှာသောအိမ်ရှိနေပါက ထိုအိမ်ကိုဘုရားဆောင်ရွှေ့ခြင်းသို့မဟုတ်အိမ်အမိုးထပ်မြှင့်ခြင်းပြု အပ်၏ ။မကျန်းမမာဖြစ်တတ်၏ ။ဦးခေါင်း အပူတိုက်ဟုခေါ်ကြသည် ။သတိထားအပ်၏ ။ကိုယ့်အိမ်၏ ဘေးဘယ်ညာအိမ်တို့မှဆူညံစကား ပြင်းသောအသံချဲ့စက်ဆောင်းဘောက်စ်အသံအဆဲအဆိုနူတ်ကြမ်းတမ်းခြင်းပြု လုပ်နေပါကထိုအိမ်သည် နတ်ဆိုးလှည်းအိမ်ဟုခေါ်သည် ။အမင်္ဂလာအသံကြားတွင်ညပ်နေ၍ဖြစ်၏ ။မေတ္တသုတ် … Read more
ထူးဆန်းတဲ့ရေနစ်သေဆုံးမှု သေဆုံးသူ အငယ်မလေးအမည်က လှလှစိုး အသက်က၁၄နှစ် အကြီးမလေးအမည်က သက်ဖူးအိမ် ၁၆နှစ် ညီအမဝမ်းကွဲတွေ ဖြစ်စဉ်က ၃.၅.၂၀၂၀ မနက်၈နာရီလောက်မှာ ဘေးအိမ်ကကောင်မလေးက သူရည်းစားမွေးနေ့ရှိတယ် လိုက်ခဲ့ပါခေါ်လို့ လိုက်သွားပီး သခ်ျိုင်းဘေးကကျောင်းပျက်ထဲမှာ ဘီယာတွေသောက် ကြတာ မိန်းခလေးက သုံးယောက် ယောက်ျားလေးက၆ယောက်စုစုပေါင်း ကိုးယောက် သေဆုံးသူမိန်းခလေးနှစ်ယောက်က တခြားယောက်ျားလေး ၆ယောက်နဲ့သိကျွမ်းဖူးခြင်းမရှိ သောက်စားပီးအပြန် လှေမှောက်ပီး သေတာလို့ အသက်ရှင် ကျန်တဲ့ ကောင်လေး၆ယောက်နဲ့ ကောင်မလေးထွက်ဆို လှေမှောက်ချိန်က တနာရီ ညနေ၆နာရီမှ သတင်းပို့ မှော်ဘီချောင်းဝအုပ်စု သရက်ကုန်းဆိပ် ကုန်းကလေးကျေးရွာမှာဖြစ်တာ အမှုမှန်ပေါ်ပါစေ credit han nyein oo ————————– unicode ထူးဆနျးတဲ့ရနေဈသဆေုံးမှု သဆေုံးသူ အငယျမလေးအမညျက လှလှစိုး အသကျက၁၄နှဈ အကွီးမလေးအမညျက သကျဖူးအိမျ ၁၆နှဈ … Read more
နောက်နာရီဝက်ကနေ (၃)နာရီအတွင်း မိုးရွာသွန်းမယ့် ဒေသများ
နောက်နာရီဝက်ကနေ (၃)နာရီအတွင်း မိုးရွာသွန်းမယ့် ဒေသများ ဒီခန့်မှန်းချက်ကိုတော့ Su Su San က ခန့်မှန်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် ပုသိမ်မုံရွာလမ်းပိုင်း ကြံခင်း မင်းလှ အုတ်တွင်း နေပြည်တော်လမ်းပိုင်း… နောက်နာရီဝက်မှ သုံးနာရီးအတွင်း မိုးရွာလာပါတော့မယ်… လျှပ်စီးမိုးကြိုးနဲ့ လေပြင်းအန္တရာယ်ရှိပါတယ် မော်တော်ယာဉ်မောင်းကြီးများ သတိနဲ့ဖြေးဖြေးမောင်းကြပါ… 10/05/2020 at 3:05pm (MMT) SU SU SAN လေးစားစွာဖြင့် credit မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ မိုးလိုနေတဲ့တောင်သူများ မိုးရေအမြန်ဆုံးရရှိနိုင်ကြပါစေ အရမ်းပူနေတဲ့ ဒေသတွေမှာလဲ ရွှေမိုးကြီး လေမပါ မိုးကြိုးမပါပဲ ရွာသွန်းဖြိုးနိုင်ပါစေ ခုလိုအချိန်နဲ့ တစ်ပြေးညီ ခန့်မှန်းပေးတဲ့ မ su su san ကိုလဲ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ် လေးစားစွာဖြင့် #ပေသီး ————————– unicode နောကျနာရီဝကျကနေ (၃)နာရီအတှငျး … Read more
(ထိတလြနြ့စရာသတငြး) ကွောငြးသူ ၂ဦး ကို ဆရာငါးယောကြ တလှညြ့စီ ယုတမြာခဲ့ကှ
(ထိတ်လန့်စရာသတင်း) ကျောင်းသူ ၂ဦး ကို ဆရာငါးယောက် တလှည့်စီ ယုတ်မာခဲ့ကြ ကျောင်းသူလေးတွေကို ဝိုင်း မုဒိမ်းကျင့်နေကြတဲ့ဘူရီလမ်က ကျောင်းဆရာ ဆွင်းမင်း ဂိုဏ်း ကို အာမခံပေးလို့မကျေနပ် …………….. ထိုင်းနိုင်ငံ ဘူရီလမ်ခရိုင် မုဒိမ်းတရားခံ အထက်တန်းကျောင်းဆရာ (၅) ဦးနဲ့ ကျောင်းသားနှစ်ဦး ကို ခရိုင်တရားရုံးက အာမခံပေးခဲ့တာကို တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ မကြေနပ်ချက်တွေများနေပြီး ဝေဖန်မူ့တွေ တိုးလာနေတာကြောင့် ခရိုင် အာဏာပိုင်တွေဟာ ဒီအမှုအတွက် အရေးပေါ်အစည်းဝေးထိုင်နေကြရပါတယ်။ အသက် ၁၄ နှစ် မပြည့်သေးတဲ့ ကျောင်းသူလေးနှစ်ဦးကို ဒီမုဒိမ်းဆရာငါးဦးက နည်းမျိုးစုံသုံးပြီး ကာမဆက်ဆံနေကြရာမှာ တကြိမ်မှာ ဆွင်းမင်း လို့ ကာမလောကသားတွေကြားမှာ အသိများတဲ့ အုပ်စုလိုက် ဝိုင်းပြီးကာမ ဆက်ဆံကြရာမှာ တပည့်ကျောင်းသားနှစ်ဦးပါ ပါဝင်ခဲ့ပါအတယ်။ခုလိုဖြစ်ရပ်ကို ရုပ်သံဖိုင်တွေရိုက်ထားပြီး … Read more
တဈကယျအဖွဈပကျြလေးပါ 👉ဖာခေါငျးမြားသို့ပေးစာ👈 တစ်ကယ်အဖြစ်ပျက်လေးပါ 👉ဖာခေါင်းများသို့ပေးစာ👈 ယခုခေတ် လူငယ် ကျား/မ မရွေး ပြီးဆုံးအောင်ဖတ်ပေးကြ​စေလိုပါတယ်​​နော်​. #a´ ” ဟျောင့် ငါ့စော်ဆီကအဖြေရပြီကွ “#b´ ” ဟုတ်လား ” Congrats သားကြီးတစ်ဝိုင်းတော့လုပ်လိုက်တော့ လအနည်းငယ်အကြာ…… #b ဟျောင့် မင်းစော်နဲ့ ဘယ်အခြေအနေရောက်နေပြီလဲ ” ပြောစမ်းပါဦး ” #a ဒီလိုပါပဲကွာ ” အဆင်ပြေပါတယ် ” #b ငါမေးတာက ဟိုဟာဒီဟာလုပ်ပြီးပြီလား #a ” ဟာ ” မဖြစ်ရသေးပါဘူးကွာဒီတိုင်း ရိုးရိုးသားသားပဲချစ်ကြတာပါကွ #b မင်းကလဲ ညံ့လိုက်တာကွာ,,,ဒီခေတ်က ကိုယ်မစားရင် ” သူများစားတဲ့ခေတ်ကွ ” #a ” ဟင် ” ဟျောင့် ဘာဆိုင်လို့လဲကွ… #b … Read more
မင်းရာဇာအိမ်အကူမလေးကသူတွေ့ကြုံရတဲ့ခါးသီးမှုတွေနဲ့လက်ရှိသူ့ခံစားချက်ကိုအခုလိုပြောပြ(အသံဖိုင်) ##”အမြန်လမ်းလူမရှိတဲ့နေရာခေါ်သွားပြီး ဦးရခိုင်လေးကချုပ်တယ်၊ ဦး(မင်းရာဇာ)ကလှီးတယ်၊မကြီးကမိန်းမကိုယ်ကိုလှီးခိုင်းပေမဲ့ သမီးက ရုန်းလိုက်တော့အပေါ်ကိုရှပ်ထိသွားတယ်။ သွေးတွေထွက်လာတော့ ပုဆိုးနဲ့ဖိခိုင်းထားတယ်။ ကားပေါ်မှာ သူတို့ဒီလိုလုပ်တာ ဘယ်သူမှ မသိစေနဲ့ပြောတယ်၊ အိမ်ကျတော့ ကြီးကြီးကိုပြောတော့ သူတို့ပြန်လာပြီး ဆေးခန်းပြပေးတယ်၊ အိမ်မှာပဲကြီးကြီးက ဆေးကုပေး ခိုင်းတော့ကုပေးရတယ် ခေါင်းကတော့မူးနေတာပါပဲ၊ ခေါင်းကို တုနဲ့ထုတာကတော့ နောက်ရက်မှ ထပ်ဖြစ်တာပါ” လို့သူကြုံတွေ့ရတာတွေကို ပြောပြလိုက်တဲ့ .>>. မင်းရာဇာ တို့ အိမ်အကူမလေး ဂရေ့စ် (အမည်လွှဲ)။ See Less ရုပ်သံဖိုင်ကို အောက်ဆုံးတွင်ဖော်ပြထားပါသည်။ —————————- unicode မငျးရာဇာအိမျအကူမလေးကသူတှကွေုံ့ရတဲ့ခါးသီးမှုတှနေဲ့လကျရှိသူ့ခံစားခကျြကိုအခုလိုပွောပွ(အသံဖိုငျ) “အမွနျလမျးလူမရှိတဲ့နရောချေါသှားပွီး ဦးရခိုငျလေးကခြုပျတယျ၊ ဦး(မငျးရာဇာ)ကလှီးတယျ၊မကွီးကမိနျးမကိုယျကိုလှီးခိုငျးပမေဲ့ သမီးက ရုနျးလိုကျတော့အပျေါကိုရှပျထိသှားတယျ။ သှေးတှထှေကျလာတော့ ပုဆိုးနဲ့ဖိခိုငျးထားတယျ။ ကားပျေါမှာ သူတို့ဒီလိုလုပျတာ ဘယျသူမှ မသိစနေဲ့ပွောတယျ၊ အိမျကတြော့ ကွီးကွီးကိုပွောတော့ သူတို့ပွနျလာပွီး ဆေးခနျးပွပေးတယျ၊ အိမျမှာပဲကွီးကွီးက … Read more
ယခုနှဈထဲမှာ ထူးထူးခွားခွား အပွောငျးအလဲ အကောငျးအဆိုးမြားမညျ့ နဖှေ့ားမြား
ယခုနှစ်ထဲမှာ ထူးထူးခြားခြား အပြောင်းအလဲ အကောင်းအဆိုးများမည့် နေ့ဖွားများ တနင်္လာနေ့ဖွား … ရာထူးတိုး အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများဆုပ်ကိုင် ပိုင်ဆိုင်ရလတ္တံ မင်းစိုးရာဇာများ၏ မြှောက်စားခြင်းကို ခံရလတ္တံ အတိုက်အခံများသော်လည်း အတိုက်အခံများကို အောင်နိုင်လတ္တံ ချစ်ရေးကိစ္စတွင် နားလည်မှု လွဲမှားမှုများ ဖြစ်ရလတ္တံ ချစ်သူနှင့်မကြာမကြာ စကားများရလတ္တံ အစိုးရဝန်ထမ်း ကုမ္ပဏီဝန် ထမ်းများနှင့်ဖူးစာ ဆုံရလတ္တံ ကျန်းမာရေး အထူးစိုးရိမ်ဖွယ်မရှိ တပည့်အ ‌ခြွေအရံပေါများကာ ဆရာ တစ်ဆူဖြစ်လတ္တံလက်အောက်ငယ်သားများ၏ ကျေးဇူးသိတတ်မှုကို ခံယူရ လတ္တံ အလုပ်အကိုင် နေရာ ပြောင်းရလတ္တံ ချဲ ထီပေါက် ကိန်း ရှိလတ္တံ လောင်းကစား သို့ လောင်းကစားဆန်ဆန် လုပ်ကိုင်ရသည့်အလုပ်မိားအောင်မြင်လတ္တံ စနေ သောကြာသားသမီးများနှင့် စပ်တူ အလုပ် လုပ်က ပိုအောင်မြင်လတ္တံ တ်ရော စန်းပါပွင့်ကာ အိမ်ထောင်ကျကိန်းရှိအံ့ … Read more
“အသက်ထက်ပိုချစ်တယ်လို့ ပြောပြောနေတဲ့သူတွေကို ညာပြောနေတဲ့သူတွေလို့ ဒဲ့ပြောလိုက်တဲ့ ပန်ကိတ်ဒါဒါ”
“အသက်ထက်ပိုချစ်တယ်လို့ ပြောပြောနေတဲ့သူတွေကို ညာပြောနေတဲ့သူတွေလို့ ဒဲ့ပြောလိုက်တဲ့ ပန်ကိတ်ဒါဒါ” ပရိသတ်ကြီးရေ ပန်ကိတ်ဒါဒါလို့ ချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်လေ့ရှိကြတဲ့ ယမင်းဦးကတော့ ပညာရေးမှာလည်း Masterဘွဲ့ ကို ရရှိကာသြစတျေးလျနိုင်ငံမှာ အခြေချ နေထိုင်သူတစ်ယောက်ပါ။ သူမရဲ့ဝါသနာအရအလှအပရေးရာဆိုင်ရာတွေကို ဝေမျှလေ့ရှိတဲ့အပြင် ခွန်အားရှိစေတဲ့စာလေးတွေ အတွေးအခေါ်လေးတွေကိုလည်း ပရိသတ်တွေကို ချပြလေ့ရှိသူတစ်ဦးပါ။ သူမရဲ့အတွေးအခေါ်လေးတွေနဲ့အလှအပရေးရာဆိုင်ရာတွေ ဝေမျှမှုကြောင့် မိန်းကလေးပရိသတ်တော်တော်များ သဘောကျနှစ်သက်ရတဲ့ ဆယ်လီတစ်ဦးလို့တောင်ဆိုရမှာပါ။ လက်ရှိမှာလည်း သူမရဲ့ အတွေးလေးအနေနဲ့ ” လူတစ်ယောက်က တခြားလူတစ်ယောက်ကိုသူတို့အသက်ထက်ပိုချစ်တယ်ဆိုတာညာတာ။(ပြောနေတဲ့ စက္ကန့် ၃၀ လောက်တော့ ဟုတ်မှာပေါ့လေ)မဟုတ်လည်း ကိစ္စတော့ သိပ်မရှိပါဘူး။ ဘာလို့ဆို ကိုယ်က ဒီမိသားစုဒီချစ်သူဒီသူငယ်ချင်း တွေကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်“စိတ်ရင်းစေတနာ အမှန်” ပဲ လိုတယ် လို့မြင်တယ်။အချင်းချင်းလေးစားမှုရှိတဲ့ ၊ မာန်မာနကင်းတဲ့၊ ရယူလိုမှုနည်းတဲ့ ၊ နားလည်မှုရှိတဲ့ ဘယ်ဆက်ဆံရေးမဆို ထာဝရထက် တစ်ရက်တော့ပိုမှာပါ။ ဟန်ဆောင်ထားတဲ့အရာတွေကတော့ … Read more